“Waan ka guuleysan doonaa Uruguay”…. Adrien Silva – Gool FM
“Waan ka guuleysan doonaa Uruguay”…. Adrien Silva
(Russia) 29 Juunyo 2018. Laacibka xulka qaranka Portugal Adrian Silva ayaa wuxuu sheegay in ay awood u yeelan karaan in ay guul ka gaaraan xulka qaranka Uruguay kulanka ay ku wada ciyaari doonaan wareega 16-ka koobka aduunka 2018.
Adrian Silva ayaa kasoo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka la wada sugayo ay wada ciyaari doonaan xulalka Portugal iyo Uruguay.
“Waxaan si fiican ugu diyaar garoownay kulankan waxaana dooneynaan inaan guul gaarno”.
“Waxaan heysanaa tayada shaqsiyadeed iyo mida guud, waxaan si wanaagsan u garaneynaa meelaha ay ka xoogan yihiin iyo meelaha ay ka liitaan, waxaan si wanaagsan u garaneynaan inaan ka guuleysan karno”.
“Uma maleynayo inuu yahay kulan adag, laakiin waa kulan u dhaxeeya laba xul waaweyn, waxaan diyaar u nahay kulan kasta, hadii ay ahaan lahayd dhanka difaaca ama dhanka weerarka”.
“Ilaa iyo haatan lagama dhalinin wax gool ah, laakiin waxaa rajeenayaa inaan soo afjari doono, aan aragno sida ay wax u dhacaan”.
"Ka waran haddii aad Ronaldo ku la tartanto doorashada madaxtinimada?" - Donald Trump oo hadalkaan ku yiri madaxwaynaha Portugal!